ग्यानेटलाई यसको बुटबाट टाउको निस्कन आवश्यक छ | Martech Zone
आइतबार, अगस्त 12, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
सबैले यस अभिव्यक्तिको बारेमा सुनेका छन् आफ्नो टाउको आफ्नो बट मा माथि छ। संग Gannettयद्यपि तिनीहरूले वास्तवमै अभिव्यक्तिलाई वास्तविकतामा ल्याएका छन्। रूथ होलाडे एक तिखार्ने जिब्रोको साथ एक दुष्ट व्यंग्य ब्लगर हो… र उनी मरेकी छिन्, विशेष गरी जब यो गनेटमा आउँछ र इंडियानापोलिस स्टार।
हामी दुबै त्यहाँ काम गर्ने गर्थ्यौं, रूथ सम्पादकीयबाट निवृत्त भइन् र म अनुरक्षण गर्दै थिए जब गनेटले एक भिपीमा ल्याए जसले प्रतिभाको सम्पूर्ण विभाग सफा गरे।
गन्नेनेट बिक्रीको लागि?
भर्खरका अफवाहहरू ती हुन् गनेटले चाँडै बिक्रीको लागि तयारी गरिरहेको हुन सक्छ। मलाई खास मतलब छैन। म छोडेर जाँदा नै मैले आफ्नो स्टक बेचे, किनकि मेरो प्रस्थानको अर्को लक्षण हो भनेर स्वीकार गर्दै मोन्स्टरस कर्पोरिटस, यस्तो पनि भनिन्छ आफ्नो टाउको आफ्नो बट मा माथि छ.
पहिले केही पृष्ठभूमि - मैले दुई अखबार संगठनका लागि काम गरें - ल्याण्डमार्क र Gannett। यद्यपि दुई कम्पनीहरू उद्योगमा समान थिए, तिनीहरू प्रबन्धनमा बढी भिन्न हुन सक्दैनन्। जहाँ ल्याण्डमार्कले यसको सम्पत्ती र प्रबन्धकहरूको स्वायत्ततामा विश्वास गर्‍यो, गनेटले नियन्त्रणमा विश्वास गर्दछ।
एक ग्यानेट अखबारमा डाटाबेस मार्केटरको रूपमा, म स्थानीय क्षेत्र र कम्पनीमा प्रतिस्पर्धा थियो। यो बाहिरी रूपमा स्पष्ट थिएन र मैले कर्पोरेटसँग ठूलो सम्बन्ध राखें - तर तथ्य यो थियो कि तिनीहरूलाई सफल हुनको लागि तिनीहरूले मलाई व्यवसायबाट बाहिर राख्नुपर्‍यो। निगमले कर्पोरेट रणनीतिहरू विकास गरेर यसको लायक प्रमाणित गर्न सक्दछ, अधिक स्थानीय कर्मचारीले उनीहरूलाई हटाउन सक्दछन्। तिनीहरूको आजीविका, बोनस, र प्रचारहरू यसमा निर्भर थिए। त्यसोभए, जब मसँग अधिक अनुभव भएको हुन सक्छ र राम्रो प्रदर्शनकर्ता हुन सक्छ - म्याक्लिन, भर्जिनियामा यस प्रकारको जानकारीलाई हटाउनु पर्ने थियो।
ग्यानेटले सबै विभागहरूमा यो गर्दछ, धेरै आलोचनात्मक रूपमा सम्पादकीयमा। कुनै पनि समाचार पत्रको इन्टरनेट र अन्य मिडिया संसाधनहरूमा भएको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी लाभ यसको स्थानीय प्रतिभा हो। यी व्यक्ति हुन् जसले समुदायमा सम्बन्धहरू सिर्जना गरेका छन् र जान्दछन् कि त्यहाँ जब दरिलो चिन्ता र चिन्ताहरू हुन्छ जब यो हाम्रो नागरिक नेतृत्वको कुरा आउँछ। यो विभाग पनि छ कि सबै भन्दा बढी त्याग गर्न देखिन्छ। सम्पादकीयमा मैले साथी भएका मानिसहरू दिन र रात आफ्ना बुटहरू काम गर्थे र टन्न खुला पोष्टहरू जुन कहिल्यै भरिने थिएनन्। तिनीहरू मध्ये धेरै अब गएका छन् ... यो शहरको लागि ठूलो क्षति हो।
यो लाभ कहाँ जान्छ हेर्न सजीलो छ:
इन्डियानापोलिस स्टार अब एपीको मिश्रण हो र बिचमा स्थानीय रिपोर्टि of छर्कने विज्ञापन। उद्योग विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई भन्नेछन् कि यी कटौतीहरू आवश्यक परेका छन किनकि मानिसहरू वेबमा उनीहरूको समाचार र सूचनाको लागि हेरिरहेका छन्।
म शब्दमा राख्न सक्दिन कि मलाई कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ। यो घरेलु अटोमा विफल बिक्रीको लागि टोयोटालाई दोष दिनु जस्तै हो। Gannett कर्पोरेट कर्मचारीहरु को लागी कसैलाई दोष छैन तर आफैलाई। उनीहरूसँग समुदायमा आफ्नो ठोस अडान उठाउन र यो विज्ञापन र सम्पादकीय दुबैको लागि लाभ उठाउने अवसर थियो। यसको सट्टा तिनीहरूले स्थानीय अखबारलाई निगममा नियन्त्रण छाडिदिए।
इंडियानापोलिस स्टार बनाम गणनेटमा एक नजरले चीजहरू कसरी काम गर्छन् भन्ने सब भन्दा स्पष्ट प्रमाण प्रदान गर्दछ।
गनेटले देशको सब भन्दा अविश्वसनीय कर्पोरेट मुख्यालयको साथ पुरस्कार जित्यो भने, इन्डियानापोलिस स्टारलाई शहरको सबैभन्दा भद्दा मतदान गर्न सकिन्छ। मैले एउटा संलग्न भवन, अमेरिकन बिल्डिंगमा काम गरें ... जुन पहिलो केही तल्ला बाहिर बस्न अफवाह गरिएको थियो। मैले महसुस गरे कि यो त्यस्तो छैन को मुद्दा, यो यसको एक महान दृश्य मात्र हो।
यस्तो देखिन्छ कि मुनाफा मार्जिन अट्रेसन र सर्कुलेशन घाटा मार्फत सहन गर्दैछ। स्थानीय रूपमा, स्टारले यसलाई आफ्ना पाठकहरूको फोटो र ब्लग पोष्टहरूको साथ सम्पादकीय पूरक गर्न जारी राख्छ। जबकि म यो असहमति जनाउँदिन कि यो एक उत्तम ब्यावसायिक निर्णय हो, दुखः त स्थानीय प्रतिभामा लगानी गर्नुको सट्टा बचत कर्पोरेटमा धकेलीरहेको देख्दछु।
IndyMoms कसरी चीजहरू सही गर्ने भन्नेको उदाहरण हो। IndyMoms 'महाप्रबन्धक हो जेनिफर गोम्बाच, एक रमाईलो प्रतिभाशाली महिला जुन मलाई स्टारमा काम गर्न खुशी थियो।
जेनिफर केवल एक प्रतिभाशाली मार्केटर, लेखक र उद्यमी होइनन्, उनी स्थानीय थिइन् र धेरै लामो समयसम्म अखबारमा थिइन् (र प्राय: बेवास्ता गरिएको थियो)। म त्यहाँ हुँदा जेनिफरको मुनि काम गर्ने अवसरलाई मन पराउँथें। उनी एक महान सल्लाहकार र एक असल मित्र थियो।
गणनेट के गर्नु पर्छ
यदि ग्यानेट वास्तवमै यसलाई जान चाहान्छ भने, छरिनीहरूले तिनीहरूको आफ्नै कर्पोरेट स्टाफबाट सुरु गर्नु पर्छ। म मेरा साथीहरु र साथीहरु लाई समय भन्दा पहिले माफी चाहन्छु, तर यो जहाँ तपाईको समस्याहरु रहेको छ।
तपाईंको स्थानीय अखबारलाई स्वायत्तताको साथ प्रदान गर्नुहोस् उनीहरूले व्यापार कायम राख्न आवश्यक छ। उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसायमा 'लगानी' गर्न अनुमति दिनुहोस् तर तिनीहरूलाई उत्तरदायी राख्नुहोस्। लगानीले नाफाको मार्जिनमा कटौती गर्न आवश्यक छ जुन उनीहरूले मुख्यालयमा माया गर्न थालेका छन् तर यो आवश्यक छ। देश भर प्रतिभा बदल्नुको सट्टा अखबार भित्रबाट प्रचार गर्न सुरु गर्नुहोस्।
जेनिफरले इन्डीमम्ससँग के गरिदिएको छ हेर्नुहोस्। यो स्थानीय हो, यो व्यक्तिगत हो, र यो महान छ। तिनीहरू पाठकहरूसँग जडान भएका छन् र स्थानीय विज्ञापनदाताहरूलाई एक खास स्थानीय डेमोग्राफिकको साथ जडान गर्नको लागि एक उत्तम माध्यम प्रदान गर्दछ। यो सफलता को लागी उत्तम नुस्खा हो र धेरै पटक दोहोर्याउन सकिन्छ।
गनेटले यसको टाउको आफ्नो बटबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ। केही मान्छे भन्छन् सबै राजनीति स्थानीय छ! अखबार उद्योगमा, सबै डलर स्थानीय छन्! यद्यपि, गान्नेटलाई आफैंमा आगो लगाउन मैले मेरो सास फेर्ने छैन।
Martech Zone विज्ञापन उमेरका शीर्ष Blo० ब्लगमा छ